အမျိုးမျိုးသောပြန်ဆိုချက်များနှင့် Oppo A5 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုစစ်ထုတ်သည် Androidsis
Oppo A5 သည်အချို့သောပြန်ဆိုချက်များမှတဆင့်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဒီကိရိယာသည်အလယ်အလတ်တန်းစားသတ်မှတ်ချက်များ၏မိုဘိုင်းလ်အဖြစ်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ယိုစိမ့်မှုမှပေးသောသတင်းအချက်အလက်မှတဆင့်၎င်းသည်ခန့်မှန်းခဲ့သည့်အတိုင်းထုဒီဇိုင်းနှင့်အတူရောက်ရှိလိမ့်မည်။
လက်ကိုင်ဖုန်းတွင် ၆.၂ လက်မမြင့်မားသော (HD) IPS LCD မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားပြီး 6.2 x 1.520 pixels resolution ရှိသည် ၎င်းသည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဒီဇိုင်းဖြင့်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သော်လည်းတစ်ချိန်တည်းတွင်စျေးကွက်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသောတရုတ်ဆိပ်ကမ်းများစွာ၏လမ်းကြောင်းသစ်ကိုလက်ခံသောကြောင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ရိုးရှင်းမှု၊
Oppo A5 သည်ကောလာဟလအစီအစဉ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် octa-core Qualcomm Snapdragon 450 processor ဖြင့်မောင်းနှင်သည် (၁.၈ GHz နှုန်းဖြင့် 4x Cortex-A53 + ၁.၈ GHz နှုန်းတွင် 1.8x Cortex-A4) ၏ 53-bit ဗိသုကာနှင့် 1.8nm 64GB စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော LPDDR14 RAM နှင့်သိုလှောင်မှုပမာဏ 3GB ပါဝင်သည်။ ဒါ့အပြင်ဓာတ်ပုံအပိုင်းနှင့်ပတ်သက်။ , အနောက်ဘက်တွင် 13MP နှင့် 2MP Resolution တပ်ဆင်ထားသည် ယဉ် Bookeh အကျိုးသက်ရောက်မှုပေး။ 8 Megapixel Sensor တပ်ဆင်ထားသည်။ ရှေ့ဖက်ရှိအထစ်အတွင်းတွင်ရှိသည်။
Android 8.1 Oreo အလုပ်လုပ်သည်၎င်းသည် ၁၅၆.၂ x ၇၅.၆ x ၈.၂ မီလီမီတာကိုတိုင်းထွာပြီး ၄၂၃၀mAh ဘက္ထရီကြီးမားသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကောင်းမွန်သော၊ လက်ဗွေဖတ်တဲ့သူမရှိမျက်နှာမျက်နှာပြင်သော့ဖွင့်ခြင်းကဖြစ်နိုင်သည်။
ဓာတ်ပုံများအရ အပြာနှင့်ပန်းရောင်: နှစ်ခုအရောင်မျိုးကွဲအတွက်လာလိမ့်မယ်။ ၎င်းတွင် 3.5mm audio jack နှင့် microUSB port တစ်ခု၏အောက်ခြေတွင်လည်းပါ ၀ င်သည်။
အထူးသ ဒီသတ်မှတ်ချက်များကိုတရားဝင်မဟုတ်ပါ, ဒါကြောင့်ဒီကမိတ်ဆက်သောအခါ Oppo ကနေနောက်ဆုံးစကားလုံးကိုစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည် အလယ်အလတ်.
စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ မူဘာမှမထုတ်ဖော်နိုင်သေးသော်လည်းအရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းအချိုးအစားရှိသည့်ဖုန်းများကိုကမ်းလှမ်းရန် OPPO ၏မကြာသေးမီကဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ပြောင်းလဲမှုတွင်သင်၏ထွက်ပေါက်ကုန်ကျစရိတ်သည်ယူရို ၁၅၀ မှ ၂၀၀ ကြားဖြစ်နိုင်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » အမျိုးမျိုးသောပြန်ဆိုချက်များနှင့် Oppo A5 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်